I-Wyndham Ka Eo Kai Resort ~ 1B Ilala 4 ~ Gorgeous - I-Airbnb
I-Wyndham Ka Eo Kai Resort ~ 1B Ilala 4 ~ Gorgeous
Princeville, Hawaii, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Resort Stay
U-Resort Stay Ungumbungazi ovelele
Ukuhamba Ibanga lokuya e-Anini Beach Trailhead, e-Princeville Park, naseSikhungweni Sokuthenga
Eduze kweHanalei Bay kanye ne-Anini Beach! Itholakala e-Princeville ku-North Shore enhle yase-Kauai, indawo eshisayo ye-Ka'Eo Kai Resort itholakala phakathi kwezindawo eziluhlaza okotshani, ezibheke umgwaqo omkhulu ongunombolo-3 we-Makai Golf Club enokubukwa kolwandle nezintaba. Ukuhamba nje imizuzu eyi-10 ukusuka eHanalei Bay edumile, noma cishe imizuzu eyi-15 ukusuka endaweni ebabazekayo yaseKilauea Lighthouse Point & Wildlife Refuge.
* * Sicela uqinisekise ukuthi imoto yakho iqashwa NGAPHAMBI kokubhukha, ngenxa yokushoda kwemoto eqashisayo. Asikwazi ukukhansela ukubhukha ngokususelwa ekukwazini ukuqasha imoto.* *
Le-condo evulekile engu-1B ilala izivakashi ezingu-4 futhi cishe ingu-1,700 sq. ft. Amayunithi anombhede omkhulu ongu-1 ekamelweni lokulala elikhulu, usofa weNdlovukazi ontofontofo endaweni yokuphumula negumbi lokugezela eliphelele. Kukhona usayizi ogcwele, ikhishi elinakho konke, indawo yokudlela ehlukile ehlala abantu abangu-4 kanye nomshini wokuwasha/wokomisa. Iyunithi ngayinye inendawo enkulu yangasese enefenisha.
* * Qaphela: I-Air conditioning ayitholakali Nokho iyunithi inamafeni kasilingi kuwo wonke amagumbi namafasitela e-jalousie avumela imimoya yokuhweba yesiqhingi epholile ukuba iphumule phakathi kweyunithi.
* * Qaphela: Izwe lase-Hawaii lidinga ukuthi zonke Izindawo Zokuphumula ziqoqe Intela Yokuhlala Yesikhashana yase-Hawaii, esekelwe kusayizi weyunithi. Lokhu kuhlanganisa nentela yendawo yokuhlala yesikhashana kanye nentela yokuthengisa eqoqwe enkundleni ye-Airbnb. Indawo yokwamukela izivakashi izoqoqa le ntela ekuphumeni. Inani lale ndawo enamakamelo okulala angu-1 ngu- $ 13wagen/day.
* * Qaphela: Izithombe lapha zimelela. Wonke amayunithi asemanzini futhi amayunithi angempela abelwa amahora angu-24 ngaphambi kokungena. Nakuba ukuhlobisa kufana kakhulu kuyo yonke indawo, izinhlelo zaphansi nokubukwa kuzohlukahluka futhi amayunithi aphansi awanawo amasilingi avulekile. Ungabelwa iyunithi ephansi noma iyunithi ephezulu kuye ngokutholakala. Sicela usazise uma udinga iyunithi ephansi. Awekho amakheshi.
4.63 · 24 okushiwo abanye
I-Princeville iyindawo enhle, ethule enezindawo zokungcebeleka kanye nezindlu ezinkulu ezinokwakheka kwezwe. Itholakala emaweni ngasolwandle ogwini oluhle olusenyakatho yeKauai futhi inegalofu elisezingeni lomhlaba elinokubukwa okuhle!
Ibungazwe ngu-Resort Stay
Sitholakala ngocingo nange-imeyili. I-resort inezisebenzi zedeski elingaphambili 24/7. Izisebenzi zokugcina nokugcinwa kwendlu ziyatholakala futhi osukwini.
UResort Stay Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 540050050000, TA-173-554-2784-01
Hlola ezinye izinketho ezise- Princeville namaphethelo